चीन पेशेवर गीला र सुख्खा आधार तीन अनुहार मेकअप स्पंज निर्माता र आपूर्तिकर्ता सम्मिश्रण डोong्मेई
पेशेवर भिजेको र सुख्खा आधार तीन अनुहार मेकअप स्पंज सम्मिश्रण
U लक्जरी: सुपीरियर, सुपर नरम, गैर लेटेक्स फोम बाट बनेको। यो तपाइँलाई त्यो निर्दोष airbrushed रूप दिन को लागी अधिक उछाल प्रदान गर्दछ। यो मेकअप लागू गर्न को लागी यो सजिलो र छिटो बनाउँछ। पूर्ण रूपमा शाकाहारी र क्रूरता मुक्त।
● परिशुद्धता र लचीलापन: गोलाकार अन्त्य ठूलो क्षेत्रहरु को मिश्रण को लागी महान छ, जबकि टिप अधिकतम परिशुद्धता प्रदान गर्दछ उनीहरुलाई उत्कृष्ट बहुउद्देश्यीय मेकअप स्पंज बनाउन। यी स्पंजहरु धेरै ठुलो र नरम हुन्छ जब गीला हुन्छ। तिनीहरू मेकअप उत्पादनहरु को एक विस्तृत विविधता संग फाउन्डेशन, बीबी क्रीम, पाउडर, लुकाउने, अलगाव, तरल, आदि को उपयोग गर्न सकिन्छ
W कम बर्बाद: कोमलता र हाम्रो स्पंज को चिकनीपन को कारण उनीहरु अत्यधिक मेकअप भिजेनन्। यसको मतलब तपाइँको उत्पादन को कम बर्बाद छ। यो पनि बलियो स्पंज वा ब्रश जस्तै छाला जलन छैन। तपाइँको छाला यस को लागी तपाइँलाई माया गर्नुहुनेछ।
C सफा गर्न को लागी सजिलो: तपाइँ सबैलाई साबुन र तातो पानी चाहिन्छ।
Dongshen सस्तो मूल्य मा उच्चतम गुणवत्ता प्रीमियम लक्जरी मेकअप उत्पादनहरु बनाउन को लागी समर्पित छ।
सुक्खा प्रयोग: दुध वा मलाईदार उत्पादनहरु, जगहरु, बीबी क्रीम, लोशन, concealers को आवेदन को लागी गीला प्रयोग। कागज तौलिया को उपयोग गर्नुहोस् अतिरिक्त पानी बाहिर निचोड जब सम्म कुनै पानी drips। अनावश्यक फोहोर घटाउन बिस्तारै मिसाउनुहोस्।
गीला प्रयोग: थोरै स्पन्ज नम, र त्यसपछि दूषित क्षेत्रमा बच्चा शैम्पू को एक सानो मात्रा लागू (पेशेवर साबुन वा साबुन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ)। बिस्तारै मालिश र बुलबुले बनाउन स्पंज थिच्नुहोस्। कुल्ला र छिटो निचोल्नुहोस् जब सम्म त्यहाँ कुनै दाग र फोम हो। सफा तौलिया वा कागज तौलिया बिस्तारै अतिरिक्त पानी हटाउन को लागी प्रयोग गर्नुहोस्, र अन्तमा हावा सुख्खा।
1. तातो पानी को उपयोग स्पंज गीला र दाग क्षेत्रहरुमा साबुन को एक सानो रकम लागू गर्नुहोस्।
2. बिस्तारै मालिश र स्पंज प्रेस बुलबुले बनाउन।
3. कुल्ला र छिटो निचोड रहनुहोस् जब सम्म कुनै अधिक देखिने दाग र suds।
4. बिस्तारै एक सफा तौलिया वा कागज तौलिया संग अतिरिक्त नमी हटाउनुहोस् र यसलाई हावा-सुक्खा दिनुहोस्।
अघिल्लो: Dongshen उच्च गुणस्तर सेतो काठ को संभाल सिंथेटिक कपाल मेकअप फाउन्डेशन ब्रश
अर्को: सूखी वा गीला प्रयोग को लागी पेशेवर फाउन्डेशन सम्मिश्रण मेकअप स्पंज
सेभिंग सेट, मेकअप ब्रश, नाई शेभ, मेकअप ब्रश सेट, ब्रश मेकअप सेट गर्नुहोस्, मेकअप ब्रश उपकरण,